Ejipta: Mangataka vaovao momba ireo mpitsidika tranonkala ara-politika any amin’ny cybercafe ny polisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2019 6:48 GMT
Rehefa avy nanagadra bilaogera maherin'ny 100 tamin'ny taona 2008 fotsiny, mampiasa teknika hifehezana ny fahalalahan'ny aterineto ankehitriny i Ejipta, satria mangataka amin'ireo cybercafé ny polisy mba hitsikilo ireo mpanjifany.
Nilaza ny Tambajotra Arabo amin'ny vaovaon'ny zon'olombelona (ANHRI) fa andro vitsy lasa izay, dia nanery tompona cybercafe maro tany Ejipta ny mpitandro filaminana mba hampahafantatra ny polisy ny anarana sy ny kara-panondron'ireo mpanjifa izay mijery tranonkala “politika”.
Navoakan'ny ANHRI ny fanambarana amin'ny antsipirihany mitatitra fa nanao bemidina tany amina cybercafe tao Cairo ny mpitandro filaminana ary nangataka ny boky fisoratana anarana ho an'ny mpitsidika sy ny antsipiriany momba ny zavatra ataon'ireo mpitsidika hatrany am-piandohan'ny asan'ny cybercafè, hoy ny fanambarana:
Rehefa nilaza tamin'ny polisy ny tompon'ilay toerana fa tsy misy boky; dia nalain'izy ireo ny karapanondro sy ny fahazoandàlan'ilay cyber. Noraofin'izy ireo ihany koa ny fitaovana ampiasaina amin'ny aterineto, ary nentin'izy ireo tany amin'ny Biraom-piarovana any Giza ilay tompon'ny cyber. Noterena nanao sonia taratasy miampanga azy ho manao asa tsy misy fahazoan-dalana
Niantomboka hatramin'ny taona 2005 ity fihetsika ity, araka ny voalaza dia nanery ireo tompon'ireo cyber mba hanoratra ny anarana sy ny laharana famantarana an'ireo olona mitsidika matetika ny cyber ny mpitandro filaminana. Matetika tsy mandà izany hetsika izany ny manampahefana, mandritra izany dia tsy misy ny lalàna na fanapahan-kevitry ny governemanta amin'izany.
Tsara ny manamarika fa misy cyber marobe manerana an'i Ejipta, izay ahafahan'ny olona miditra aterineto mba hialavoly, manao fikarohana sy mibilaogy; indrindra fa tena mora ny saran'ny aterineto amin'izany (1EGP = 20cent/ora).